Sida loo hagaajiyo koodhka qaladka 910 ee Dukaanka Play | Androidsis
Ignacio Sala | | Mobiles, Tababarada
Ma jiro nidaam qalliin oo kaamil ah. Sidoo kale ma jiro nidaam hawlgal oo sugan oo 100% ah. Dhammaan nidaamyada hawlgalku waxay u nugul yihiin khaladaadka hawlgalka, khaladaadka kuwaas oo, kiisaska intooda badan, ay leeyihiin xal fudud, sida Khaladka Play Store 910.
Sida aan khaladka 910 uga heli karno Play Store-ka, waxaan sidoo kale Play Store ka heli karnaa fariimo kale oo khaldan oo caadi ah sida 491, 921, 413 iyo 495, kuwaas oo, in kastoo aysan iyagu keli ahayn, haddana ay yihiin kuwa ugu badan. Halkan waxaan ku tusaynaa sida loo saxo khaladaadka Play Store 910.
1 Waa maxay qaladka Google Play Store 910
2 Sida loo saxo qaladka Google Play Store 910
2.1 Qalabka dib u bilow
2.2 Ka masax kaydinta Google Play Store
2.3 Nadiifi kaydka Adeegyada Google
Waa maxay qaladka Google Play Store 910
Dhammaan soosaarayaasha nidaamka qalliinka waxay adeegsadaan nambarro taxane ah, guud ahaan tiro, si ay si dhakhso leh ugu aqoonsadaan dhibaatooyinka nidaamku soo bandhigi karo. Marka shaashadda dhimashada buluuga ah lagu soo bandhigo Windows, waxaan ilaalin karnaa a koodh qalad hexadecimtaas oo noo sheegaysa meesha khaladku ka imaan karo.
Marka laga hadlayo Windows, 99% waqtiga, waa dhibaato xagga qalabka ah, dhibaato soo baxda marka aan bedelno qayb ka mid ah qalabkayaga ama midkoodna gaar ahaan RAM, waxaad bilaabeysaa inaad muujiso astaamo aad u baahan tahay inaad ka fariisto.
Xaaladda taleefannada casriga ah ee 'Android', nasiib wanaag, lambarrada khaladaadka ayaa soo muuqday kaliya waxay saameysaa dhibaatooyinka softiweer, waligaa qalabka. Haddii qalabka kumbuyuutarka uusan shaqeynin ama uu si qalad ah u shaqeynayo, maahan inaan sugno fariin qalad ah, isticmaalaha ayaa si fiican u ogyahay inay tahay waqtigii la beddeli lahaa boosteejada.
Ciladdii 910 ee ka muuqatay boosteejooyinka Android, waxay muujineysaa in dalabka Play Store (halka lagu muujiyey) ay dhibaato ka haysato ama faragelin in kuu oggolaan maayo inaad si sax ah u turjunto tilmaamaha si aad u soo dejiso ama aad u rakibto cusbooneysiinta.
Khaladaadka kale ee laxiriira Play Store-ka isla markaana lagu xaliyo si la mid ah tan, waa 491, 921, 413, 495, 506, 509, 492, 905Si kastaba ha noqotee, farriimahan qaladka ah waxaa loo soo bandhigaa si aad u badan si ka badan 910.
Sida loo saxo qaladka Google Play Store 910
Haddii terminal-kaaga ku tuso adiga fariin qalad 910 mar kasta oo aad isku daydo inaad soo degsato codsi cusub, oo aad hore u soo dejisay ama aanu kuu oggolaanayn inaad rakibto cusboonaysiinta cusub ee barnaamijyada aad ku rakibtay qalabkaaga.
Dhammaan nidaamyada hawlgalka waxay u baahan yihiin reboot si joogto ah. In kastoo aaladaha mobilada waxaa loogu talagalay inay ahaadaan waqti dheer (ficil ahaan qofna ma daminayo taleefanka casriga ah habeenkii), waqti ka dib, hawlgalka codsiyada iyo nidaamka guud ahaan isku mid ma aha.
Waayahay maaraynta xusuusta waa otomaatig waxayna mas'uul ka tahay xiritaanka dhammaan codsiyada aannan adeegsan in muddo ah si loo helo meel lagu ilaaliyo nidaamka isla markaana aan u maamuli karno barnaamijyo kale. Si kastaba ha noqotee, sidaan ku sheegay bilowgii, ma jiro nidaam hawlgal oo kaamil ah.
Sidaa awgeed waligeed ma xanuunayso dib u bilow qalabkayaga waqti ka waqti. Dib-u-bilaabid waqtigeedii ah, waxay ka fogaan kartaa in ka badan hal dhibaato iyo cabsida guud ahaan keenta. Markaan waxaas oo dhan ku xisaabtano, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan dib u bilowno qalabkeenna.
Si aan dib ugu bilowno qalabkeena, waa inaan kaliya riix oo hayso batoonka bilowga dhowr ilbiriqsi oo dooro ikhtiyaarka Dib u Bixinta.
Haddii aan rabno inaan damino qalabka halkii aan dib uga bilaabi lahayn, natiijada waxay noqon doontaa isku mid, maadaama aan awoodi doonno inaan si buuxda u nadiifinno xusuusta aaladdayada iyo sidoo kale keydka faylka.
Ka masax kaydinta Google Play Store
Haddii ka dib markii aan dib u bilawnay terminaalkeena, aan marin u helno Play Store mar kale, waa inaan isku daynaa xal kale, xalkaas oo maraya ka tirtir khasnadda dukaanka Play Store. Si tan loo sameeyo, waa inaan fulino tallaabooyinka soo socda:
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa helitaanka dejinta qaabeynta xarunteena.
Marka xigta, dhagsii Aplicaciones.
Gudaha Aplicaciones, waan raadineynaa Play Store Google oo guji.
Kala xulashada dalabka Google Play Store, guji Kaydinta.
Marka xigta, qaybta Kaydinta, guji badhanka Nadiifi baararka.
Marka xigta, waxaan mar labaad fureynaa arjiga Play Store iyo Waxaan hubinaynaa haddii qaladkii 910 uu joogsaday inuu muuqdo. Haddii kale, waxaan u gudbeynaa qeybta xigta.
Nadiifi kaydka Adeegyada Google
Midkale oo kamid ah xalka aan hayno marka aan xalinayno qaladka 910 hadii labada xal ee hore ee aan kahadlay aysan shaqeyn, mara nadiifi kaydka Adeegyada Google. Adeegyada Google si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa oo loo shaqeeyaa iyada oo aan loo eegin nooca Android ee aad ku rakibtay qalabkaaga.
Sidaa darteed, inkasta oo terminal-ka ay maamusho Android 7 ama Android 8, Adeegyada Google waa lala socdaa tan iyo taariikhda waa marinka nidaamka deegaanka ee Google. Haddii adeegyadan, codsiyada Google aysan shaqeyn lahayn.
Tusaale cad oo ah muhiimadda adeegyadan ayaa laga heli karaa boosteejooyinka Huawei. Tan iyo markii dowladda Mareykanka ay xiri doonto albaabka Huawei si uu ula shaqeeyo shirkadaha Mareykanka, shirkadda Aasiya ma awoodin inay dib u isticmaasho nooca rasmiga ah ee Google Android waxay soo saartaa sanad walba, markaa nidaamka qalliinka ee lagu maamulo taleefannada gacanta ee Huawei kuma jiro Adeegyada Google.
Sidan oo kale, uma isticmaali kartid mid ka mid ah barnaamijyada Google ama barnaamijyada badankood ee toos looga heli karo Play Store, ilaa aadan marin u helin maktabadaha lagu darey adeegyadan waxayna adeegsadaan codsiyo aad u tiro badan.
Si loo tirtiro keydka Adeegyada Google, waa inaan fulinnaa tillaabooyinka aan kugu tusay xagga hoose:
Marka xigta, guji Aplicaciones.
Gudaha Aplicaciones, waan raadineynaa Adeegyada Google Play oo guji.
Ka dib markaan fuliyay saddexda talaabo ee aan kugu tusay maqaalkan, qaladka 910 ee soo muuqda marka la isku dayayo inaad soo dejiso codsi wuu lumay oo Waad u isticmaali kartaa Play Store mar kale si caadi ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Sidee loo hagaajiyaa koodhka qaladka 910 ee Dukaanka Play
Realme GT, waxay dooneysaa inay jabiso albaabka dhamaadka-sare [Dib u eegis]